Soo dejisan Easy Taxi 9.9.2-b28 – Vessoft
Soo dejisan Easy Taxi
Taxi Easy – software ah si ay u baadhaan una yeedha taxi ee wadamada kala duwan. Software wuxuu qeexayaa goobta user ee isticmaalaya GPS iyo qaab tagaasidii ugu dhow ee la heli karo si ay ugu yeedhaan. Easy Taxi kuu ogolaanayaa inaad la xiriirto la taksiile ah si ay u xisaabiso qiimaha, wakhtiga imaanshaha ama ka hadlo faahfaahinta kale ee safarka. Software soo bandhigayaa mouvement taxi khariiradda codsiga iyo lacagta la isku ururtay on taxameterpenge in waqtiga dhabta ah. Taxi Easy u saamaxaaya in ay aragto booqasho taariikhda, qiimaynta iyo dib u eegista darawalka ka rakaabka kale. Software interface waxay leedahay dareen ah oo si sahlan ay u isticmaalaan.
Call Fast of taxi ee kuugu dhow
Xisaabinta qiimaha iyo waqtiga yimid
Socodka dhaqdhaqaaqa taxi ku khariiradda
View macluumaadka ku saabsan darawalka
Easy Taxi Software la xiriira:
English, Deutsch, 中文, Русский... Instagram 6.11.2